Announcement | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
March 21, 2018 · 5:23 pm
သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးက အနားယူ
သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္
ဦးဝင္းျမင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိ
Filed under Announcement, Politics
Tagged as Announcement, Politics
This is not the countries like you live, you born! Don’t beabig mouth without knowing anything about Burma! Do your own business! Go study in your classroom! Don’t use ur noble peace prize asatool to bully all citizens in Burma! You’re not totally impressed! Whatashame!
(Credit: Kyaw Hsu Mon )
2009 Review by Myself
၂၀၀၉ ကိုယ့်ဖာသာ ဆန်းစစ်ချက်
မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ပေရှည်နေသော ဘွဲ့လွန် သီးဇစ် ပြီးသွားသည်။ မပြီးခြင်းအတွက် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၊ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းနှင့် ကျမ်းကြပ်ဆရာကြီးအလုပ်များမှုကို အကြောင်းပြပါသည်။ ပြသည့်အတိုင်းလည်း မှန်ပါသည်။ (ကိုယ့်ဖာသာ မှန်တာ)
ဝီကီပီဒီးယား နှစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်အတော် လုပ်ဖြစ်သည်။ ရှိသင့်ရှိထိုက်တာ တစ်ခုအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်လုပ်ပေးနေရတာကို ဂုဏ်ယူသည်၊ အားလည်းရသည်၊ ကုသိုလ်ဆိုတာ ဘုရားသွား ကျောင်းတက်မှ ရတာမဟုတ်ပါ။ မြန်မာအွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်းမှာ ဝီကီသူကြီးအဖြစ် ဝင်ပါခဲ့ပြီး၊ မြန်မာအတွက် တရားဝင် ဝီကီပီဒီယား လိုကယ် အက်ဒမင်အဖြစ် မကြာခင်က ဝင်ရောက်ကူညီခွင့်ရပါသည်။ အချိန်ကုန် ငွေပွန်းဟု မကောင်းမြင်ကြသည့်တိုင် အင်မတန် အကျိုးကျေးဇူးများသော အလုပ်ဖြစ်၍ ဂုဏ်ယူလှပါသည်။